Ra’iisul Wasaaraha “Xukuumadda aan soo dhisi doono waxay ka turjumi doontaa rabitaanka shacabka – Xeernews24
Ra’iisul Wasaaraha “Xukuumadda aan soo dhisi doono waxay ka turjumi doontaa rabitaanka shacabka
March 3 (XeerNews24)
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo arbacadii la soo dhaafay helay codka kalsoonida baarlamaanka Soomaaliya ayaa wareysi uu siiyay Idaacada VOA, kaga hadlay qorshaha Xukuumaddiisa iyo qaabka ay noqon doonto Xukuumadda uu soo dhisayo.
“Wada tashi ayaan wali wadnaa, Golaha Wasiirada aan soo dhisi doono waxay ka turjumi doonaan rabitaanka shacabka iyo Baarlamaanka, baahida dalka uu u qabo dowlad ka ambaqaada dalka meesha uu taagan yahay”ayuu yidhi Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Waxaa uu sheegay in Xukuumaddiisa uu soo dhisi doono ay noqon doonto mid ka shaqeysa xoojinta isku xidhka shacabka iyo Xukuumadda Feedaraalka.
Mar la weydiiyay sida uu uga gudbi karo caqabadaha hor-yaala ee ku aadan soo dhisida Xukuumadda iyo inta uu baarlamaanka ka keenayo ayuu sheegay in wali wada tashiyo ay socdaan.
“Wali waxaa ku jirnaa wada tashi, dalkan waa dal u baahan in la samata bixiyo, xilna cid walba laba siin karo, waxaa ku dadaaleynaa in dadka oo dhan niyad wanaag, qalbi wanaagsan iyo fur furnaan soo jiidasho leh inaan kula dhaqano”ayuu yidhi Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in Golaha Wasiirada uu soo magacaabi doono ay noqon doonaan kuwo isla xisaabtan dhab ah lagala sameeyo shaqooyinka ay qabtaan, isla markaana aan jiri doonin wax musuq maasuq ah, cidii lagu helana tallaabo laga qaadi doono.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/Raysal-wasaare.jpg 441 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-03 10:18:562017-03-03 10:18:56Ra’iisul Wasaaraha “Xukuumadda aan soo dhisi doono waxay ka turjumi doontaa rabitaanka shacabka
Qatarka kaga iman karta Soomaalia oo dhan saldhiga militeri ee UAE ka rabto... Hadalkan Muusa Bixii Maxaa loo Turjuman Kara?Soow Ma ahyn in u 1991-kii Doodan...